'हृदयघात भइसकेपछि पनि सामान्य जीवन बिताउन सकिन्छ'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
'हृदयघात भइसकेपछि पनि सामान्य जीवन बिताउन सकिन्छ'
आश्विन १३, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — प्रत्येक वर्ष २९ सेप्टेम्बरलाई विश्व मुटु दिवसको रुपमा मनाइन्छ । मुटुरोगबाट विश्वभरका मानिस पीडित हुने क्रम बढिरहेको छ । लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्यलाई ३४ वर्षको कलिलो उमेरमै अकस्मात हृदयाघात भयो ।
तर हृदयाघातबाट उनी विचलित भएनन्। बरु आफूले भोगेको रोगको अध्ययन गरि मुटुरोगबारे जनचेतना फैलाउन अगाडि सरे।मुटुरोगबाट अरुलाई सावधान गराउन यस सम्बन्धि दुईवटा किताब लेखे उनले। ब्रिटिस मेडिकल जर्नालिस्ट एशोसिएसनका सदस्य तथा ‘लन्डनमा मुटु दुख्दा’ र ‘कोरोनरी मुटुरोग’ पुस्तकका लेखक आचार्यसँग लन्डनस्थित कान्तिपुरकर्मी नवीन पोखरेलले लन्डनमा गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत छ :
विश्व मुटु दिवसको सान्दर्भिकता कस्तो छ?
बढ्दो महत्वकांक्षा, कम क्रियाशील जीवन, स्वास्थ्य सम्बन्धि न्यूनतम ज्ञानको कमी तथा चिन्तालाई ब्यवस्थित गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण भएर अहिले संसारभर मुटुरोगीको संख्या बढिरहेको छ। समयमा नै सतर्कता अपनाएर मुटुरोगबाट अकालमै कसैले पनि ज्यान गुमाउनु वा पीडित हुन नपरोस् भन्ने नै यस दिवसको मुख्य सन्देश हो। अहिले विश्व मुटु दिवसको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ।
अहिले युवाहरुमा मुटुरोग धेरै बढेको छ। यसको खास कारण के होला?
जीवनशैली, चिन्ता र ज्ञानको कमी नै युवाहरुमा मुटुरोग बढ्नुको मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ। महत्वाकांक्षा र चिन्तालाई समयमा ब्यवस्थित गर्न नसक्नु अहिले युवामा समस्या छ। दैनिक बोझपूर्ण क्रियाकलापले दिमागलाई शिथिल बनाई मानिस संयमबाट टाढा भएको अवस्था नै चिन्ताग्रस्त परिवेश हो। चिन्ताले विभिन्न किसिमबाट प्रभाव पार्न सक्छ। यसले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। जस्तै : तनाव भयो भनेर धुमपान गर्नु, बढी रक्सी पिउनु, अल्छी लाग्यो भनेर धेरै सुत्नु आदिले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छ।
मदिरा सेवन युवा पुस्तामा बढ्दो छ। यसले मुटु अथवा हाम्रो स्वास्थमा के कस्तो असर गर्छ?
मदिराले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धि अनेकौं अनुसन्धान र खोज भएको छ। अनुसन्धानले कुनैपनि परिणामको मदिरा सेवनले स्वास्थ्यमा फाइदा नहुने बताएको छ। सधैं थोरै वा धेरै नियमित मदिरा सेवन गर्नेलाई मुख तथा घाँटीको क्यान्सर हुने जोखिम तीन गुणा बढी हुन्छ। सधैं मदिरा पिउने महिलालाई स्तन क्यान्सर हुने जोखिम करिब बीस प्रतिशतले बढ्छ। त्यस्तै नियमित मदिरा सेवनले स्ट्रोक, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, कलेजोको रोग, प्यान्क्रियाजको रोग, प्रजनन कम बन्नु आदि रोगको जोखिम बढाउँछ। यसका साथै नियमित मदिरा सेवनले पाचनक्रियामा समस्या, छालामा थोप्लाहरु आउनु, अनुहार फुलिनु, छाला चाउरिने, निन्द्रा कम पर्नु, डिप्रेसन हुनु, नपुंशक हुनु जस्ता रोगहरु निम्त्याउन सक्छ।
हरेक दिन मदिरा पिउनु हानिकारक छ। दिनको तीन युनिट भन्दा बढी मदिरा सेवन गरे सिधा मुटुलाई असर पर्ने पाइएको छ। केही समयपछि धेरै मदिरा सेवनले रक्तचाप बढाउने, हार्ट फेलिएर हुने, स्ट्रोक हुने जस्ता जीवन नै जोखिममा हुने रोगको शिकार बन्न सकिन्छ। धेरै मदिरा सेवनले शरीरको बोसो शरीरका अरु अंगमा संचार पनि गराउँछ। मदिरामा धेरै क्यालोरी हुने हुँदा मोटो मानिस, मधुमेह भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
अल्कोहलले शरीरले प्राकृतिक रुपबाट भाइरल संक्रमणसँग लड्ने क्षमतालाई ह्रास गर्छ। प्रजनन बारे गरिएको अध्ययनमा नियमित थोरै मात्रै मदिरा सेवन गर्ने महिलामा गर्भ बस्ने सम्भावना कम र धेरै मदिरा सेवन गर्ने पुरुषको प्रजनन शुक्रकीट कम हुने बताइएको छ।धेरै मदिरा सेवनबाट आसटेल्डाहाइड टक्सिकको सम्बन्ध जोडिएको छ जसले डीएनएलाई नोक्सान गर्ने पाइएको छ।
त्यसैले गर्भवती हुँदा एकपटक मात्रै पनि अत्यधिक मदिरा सेवन गरेमा पेटमा भएको बच्चाको जीन नोक्सान हुन सक्छ। मदिरा सेवनले क्यान्सर हुने कारण थाहा भइसकेको छ। डीएनए परिवर्तन नभइकन क्यान्सर कोषहरू बन्दैन्। जब मदिरा सेवन गरिन्छ, आसटेल्डाहाइडले डीएनएको जीवनलाई खराब बनाउँछ र क्यान्सरको बाटोतिर धकेल्छ।
प्रत्येक व्यक्ति मुटुरोगबाट कसरी सावधानरहन सक्छन्?
मुटु रोग लाग्ने कुनै एउटा मात्र कारण छैन् तर हामीलाई थाहा छ कि केही जोखिमका तत्वहरू जस्तै: धूमपान, परिवारमा मुटुरोगको इतिहास, उच्च रक्तचाप, उच्च रगत कोलेस्ट्रोल, मधुमेह, मोटोपन, चिन्ता आदिले मुटुरोग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ।
तपाईलाइ आफ्नो नाम, ठेगाना थाहा भएजस्तै आफ्नो कोलेस्ट्रोल, रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्राको नम्बर थाहा पाउन जरुरी छ। यही अनुसार खानपान र क्रियाशीलता बढाई आवश्यक परे डाक्टरलाई भेट्नु पर्दछ। वर्षमा घटीमा एकपल्ट रगत जाँच्नुहोस्। यसले कोरोनरी मुटुरोगबाट बच्न वा सावधान हुन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जोखिमका तत्वहरुलाई समयमा नै ध्यान दिई उचित जीवनशैली अपनाए मुटुरोगबाट सावधान हुन सकिन्छ।
स्वास्थ्यकर जीवनशैली भन्नाले?
धुमपान त्याग्ने, मद्यपान छोड्ने या निकै कम गर्ने, प्रशस्त मात्रामा फलफुल र सब्जी खाने, होलग्रेन अन्नहरू, रातो मासुको बदलामा माछा खाने, जनावरबाट पाइने चिल्लो जस्तो बोसो, बटर, घीउ आदि कम गरि थोरै मात्रामा शुद्ध तोरीको तेल, सूर्यमुखी तेल आदि खाने बानी गर्नुपर्छ। स्याचुरेटेट फयाटले कोलेस्ट्रोल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ जुन मुटुरोगको प्रमुख जोखिम हो। क्रियाशील जीवन, धुमपान त्याग्नु, चिन्ताको ब्यवस्थापन, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल र मधुमेहको नियन्त्रण, पातलो शरीर, स्वास्थ्यकर खाना, दिनको आधा घन्टाको ब्यायाम आदिले कोरोनरी मुटुरोगबाट बच्न वा सावधान हुन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
बढी फलफुल र सब्जी खाँदा पोटासियम भन्ने रसायन पाइन्छ। जसले रक्तचाप कम गर्दछ। आफ्नो करेसाबारीमा तरकारी उब्जाउने तरिका अबलम्बन गर्नु बान्छनीय हुन्छ। साग सब्जी खेतीले एक त शारीरिक क्रियाकलाप बढ्ने, अर्को ताजा तरकारीको रसस्वादन गर्न पाइन्छ। बारी नहुनेले गमलामा राखेर तरकारी फलाएको उदाहरण पनि प्रशस्त छ।
पछिल्लाे समय नेपालीहरुमा मधुमेहको समस्या बढ्दो छ। यसको कारण र मधुमेहले मुटुलाई कसरी असर गर्छ?
डाइबेटिज यूकेको तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियाका मानिसलाई अन्यन्त्रकालाई भन्दा टाइप २ मधुमेह हुने जोखिम करिब चारगुणा रहेको देखिएको छ। दक्षिण एसिया मुलवासीलाई टाइप २ मधुमेह हुने जोखिममा उनीहरुको मांशपेशीले बोसो उपभोग गर्ने तरिकाले गर्दा बढी भएको अध्ययनले देखाएको छ।
ग्लास्गो युनिभर्सिटीको अनुसन्धान टोलीले पत्ता लगाए अनुसार युरोपियन मान्छेहरुको तुलनामा दक्षिण एसियाका मानिसहरुको मांशपेशीले शक्ति कम प्रयोग गर्दा इन्सुलिन हार्मोनमा कम प्रतिक्रिया दिनाले मधुमेहको जोखिममा योगदान पुरयाउन सक्ने देखिएको छ।
शरीरले बोसो उपभोग गर्ने एउटा तरिका अस्थिरपन्जी मांसपेशीहरु हुन् र अनुसन्धानकर्ताहरुले दक्षिण एशियाका र युरोपियन मानिसहरुको मांसपेशीहरुमा धेरै भिन्नता रहेको पाएका छन्। अर्को अर्थमा दक्षिण एशियाका र युरोपियन मानिससँगै एकै गतिमा हिँडे भने युरोपियन मानिसको शरीरले धेरै क्यालोरी उपयोग गर्छ।रगतमा उच्च ग्लुकोज लेभल भएपछि रगत बाक्लो र टाँसिने हुनपुग्छ। त्यसैले शरीर भरि रगत पम्प गर्न मुटुलाई भार पर्छ र यसले आर्टरीको भित्तामा असर गर्दछ जसले चिल्लो जम्ने क्रमको विकास गर्न सक्दछ।
मुटु रोगका जोखिमका तत्वहरू धुमपान, उच्च रक्तचाप र रगतमा उच्च कोलेस्ट्रोलबाट हुने नोक्सानलाई मधुमेहले थप बढाउँछ। टाइप २ मधुमेह भएको मान्छेको प्राय ट्राइग्लिसराइड बढी र एचडिएल कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ। मधुमेह भएको मान्छेलाई उच्च रक्तचाप हुने बढी सम्भावना हुन्छ। मधुमेहले मुटुको मांशपेशीलाई असर गर्न सक्छ र रगत पम्प गर्ने क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ। मधुमेहले मुटुको स्नायुलाई असर पार्न सक्छ। त्यसैले एन्जाइनाको लक्षणहरूमा फरक पर्न सक्छ। यसले इन्जाइना र ह्दयघात पत्तालगाउन ढिलो हुन सक्छ।
शरीरका अंगहरू जस्तै आँखा, मृगौला, पैतालाको नोक्सानलाई रोकथाम गर्न रगतको ग्लुकोज लेभल र रक्तचाप ठिक गरी नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। मधुमेहले कोरोनरी मुटुरोग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ। मधुमेहको मुख्य जोखिमका तत्वहरूको राम्रो उपचार र जीवनशैली परिवर्तन गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
नेपालीहरुलाई मुटुरोगको अवस्था कस्तो छ?
अध्ययनले यो देखाएको छ कि दक्षिण एशिया र अफ्रो क्यारिबियनका मान्छेहरुलाई कोरोनरी मुटुरोग लाग्ने सम्भावना अन्यत्रकालाई भन्दा बढी हुन्छ। यसमा वंशानुगत तथा जीवनशैलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। बढ्दो शहरीकरण, प्रदूषण र अस्वथ्यकर जीवनशैलीले गर्दा नेपालमा कलिलै उमेर देखि मुटुरोगबाट पीडित हुनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ।
ह्दयाघातका लक्षणहरू के के हुन्?
छातीको बीच भागमा एकदम दुख्ने देखि छातीमा साधारण असुविधा हुन्छ जसले बिरामी जस्तो अनुभव गर्दछ। दुखाई चाहिं एकदम गरुंगो या कस्सिएको हुन्छ जुन दुखाइ पाखुरा, घाँटी, गर्धन, पछाडि या भुँडीमा पनि सर्न सक्दछ। घाँटी, बँगारा, पाखुरा वा भुँडीमा मात्रै असर गर्न सक्छ। ह्ृदयघात भइरहेको मान्छेलाई पसिना आउने, टाउको हलुंगो हुने, वान्ता आउने वा श्वास फेर्न गाह्रो हुने पनि हुन्छ। केही मान्छेहरू हृदयघातहुँदा खाना अपच जस्तो ठानेर झुक्किन्छन्।
कहिलेकाँही हृदयघात ‘शान्त’ हुन्छ र यसले कम असुविधा महसुस हुन्छ। जस्तै कोही मान्छेहरूलाई छाती दुख्न यति कम हुन्छ कि डाक्टरकहाँ जांदैनन्। अरू मेडिकल टेष्ट गर्दा धेरै समय पछि थाहा हुन सक्छ अथवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मात्र हृदयघातभएको भन्ने पत्ता लाग्दछ।
ह्दयाघातको अवधिमा जीवन नै जोखिम हुने गरि मुटुका रिदमहरुको विकास हुन सक्छ। त्यसैकारणले ह्दयाघातलाई मेडिकल अकस्मातको रूपमा उपचार गरिन्छ। कसैलाई हृदयघात भइरहेको छ भने तुरुन्त एम्बुलेन्स वा अस्पताल पुग्नुपर्दछ। धेरै मान्छेहरू एम्बुलेन्स बोलाउन कुर्दा वा अस्पताल जान ढिलो गरेर जीवनलाई जोखिममा राख्दछन्। तसर्थ सक्दो चाँडो अस्पताल पुग्नुपर्दछ जसले जीवन बचाउँन सक्छ।
तपाईंको अनुभवमा हृदयघात भइसकेपछि सामान्य जीवन बिताउन कतिको सहज हुन्छ?
सहि उपचार गर्ने र जोखिम थाहा पाउने, त्यँही अनुसार जीवनशैली बदल्ने, डाक्टरको सल्लाहमा आफ्नो औषधि समयमा खाने, क्रियाशील बढाउने जस्ता गतिविधिले हृदयघात भएपछि पनि सामान्य जीवनयापन गर्न सकिन्छ। त्यो वातावरण घर परिवार लगायत सबैले बुझ्नुपर्छ। ह्ृदयघात भएको व्यक्तिलाई सधैं बिरामीको रुपमा हेरिनु हुँदैन। मुख्यकुरा स्वास्थ्यकर खाना र क्रियाशील जीवन हृदयघात भइसकेको व्यक्तिले मात्रगर्ने होइन, सबैले गर्नु जरुरी हुन्छ।
नेपालमा मुटुरोगको उपचार के कस्तो देख्नु हुन्छ?
खासगरी काठमाडौंमा मुटुरोगको उपचार राम्रो छ तर यो देश अनुसार महंगो छ। नेपाल जस्तो गरिब देशमा मुटुरोग लागेपछि धेरैले आर्थिक भार खप्नुपर्ने अवस्था भएकोले मुटुरोगबारे थप चेतना फैलाउन टड्कारो आवश्यकता हो। रोग लागिसकेपछि पनि सहि उपचार गरि सतर्कता अपनाउँदै सामान्य जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ।
तपाईंले विगतका दश वर्ष मुटुरोगको चेतना फैलाउने काममा लाग्दा कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ?
मुख्यकुरा हामीमा मुटुरोग सम्बन्धि ज्ञानको अभाव पाएको छु मैले। सामान्य रोगबारे लक्षण थाहा नपाउनु वा बेवास्ता गर्नु, अस्पताल जान वा अरुलाई भन्न संकोच मान्नु जस्ता कुरा मैले धेरैलाई भेटेपछि थाहा पाएको छु। रोग लागिसकेपछि पश्चाताप, भय, एक्लोपन आदि समस्या सामना गरिरहेको मैले देखेको छु। यसमा मैले सक्दो सहयोग गर्ने प्रयास जारी राखेको छु।
मुटु दिवसलाई कसरी उपयोग गर्ने?
आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफू स्वयं जागरूक होऔं। आफ्नो ज्यानको आफैंले हेरविचार गर्ने हो। स्वास्थ्यकर जीवनशैलीबारे जानकारी लिइ अपनाउने काम गरौं।मुटुरोगको कारणबाट ज्यान गुमाउने वा पीडित हुनुपर्ने क्षण कसैले पनि भोग्नु नपरोस् भन्ने मेरो कामना छ। स्वास्थ्य सम्बन्धि न्यूनतम जानकारी राखौं र अरुलाई पनि सिकाउने कामगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल एक दिन मात्र होइन, हरेक समयमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा मनन गरि यस दिनको उपयोग गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित : आश्विन १३, २०७५ १४:१३
चिनियाँ सरकार कर्णालीको विकासमा इच्छुक : मुख्यमन्त्री शाही
आश्विन १३, २०७५ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — चीनबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो भ्रमण कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि कोशेढुंगा भएको बताएका छन् । उनले चीन सरकार कर्णालीको विकासमा निकै इच्छुक रहेको र यो भ्रमणले सहयोगको वातावरण निर्माण गरेको बताए ।
चीन भ्रमणबाट फर्केपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सुर्खेत विमानस्थलमा । तस्बिर : कलेन्द्र सेजुवाल
‘नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले अर्को देशसँग प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि सहमति–सम्झौता गर्न मिल्दैन,’ शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तर हामीले भ्रमणको क्रममा संघीय सरकारमार्फत चीन सरकारलाई कर्णालीमा आउने प्रशस्त वातावरण बनाएका छौं।’
भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षसँग हिल्सा–जमुनाह फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि प्रारम्भिक समझदारी भएको उनले बताए। चीन सरकार मातहतको चाइना हाइवे कम्पनीसँग भएको उक्त समझदारीमा ‘फिजिबिलिटी’ अध्ययन र प्रारम्भिक सर्भे गर्ने उल्लेख छ। ‘अध्ययनपछि कुरा मिल्यो भने संघीय सरकार र चाइना हाइवे कम्पनीबीच सम्झौता भई काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भ्रमणमा हिल्सा–जमुनाह फास्ट ट्रयाक महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा रह्यो।’
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा विमानस्थल निर्माणका लागि पनि चिनियाँ प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताए। सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति र मदाने चौरमा प्रस्तावित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयर’ नाममा आफ्नै एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको र उक्त योजनाका लागि चीन सरकारसँग ऋणबारे छलफल भएको पनि शाहीले बताए। ‘कर्णालीमा आन्तरिक उडान र अन्तरप्रदेशीय उडानकन लागि कम्तिमा दुईवटा विमान खरीद गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियामा हामीले चीन सरकारसँग ऋण सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं, प्रतिक्रिया सकारात्मक आएको छ।’
कर्णालीमा लगानी गर्नका लागि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका ट्याक्स फ्रि (कर मिनाह) योजनाबारे पनि चीन सरकारलाई जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। यसले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भौगोलिक रुपमा बिकट कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ। ‘कर्णालीमा लगानी गर्ने थुप्रै सम्भावनाका क्षेत्र छन्, ती क्षेत्रबारे हामीले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिलाई जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘चीनसँग मात्र सीमा जोडिएकोले पनि हाम्रो लागि लगानी भित्र्याउन सहज छ।’
सिचुवान प्रान्तका गभर्नर यीनलीको निमन्त्रणमा मुख्यमन्त्री शाही तीन सदस्यीय टोलीसहित असोज ३ गते चीन गएका थिए। टोलीमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सांसद धर्मराज रेग्मी सहभागी थिए।
भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीको टोली सिचुवानमा आयोजित १७ औंं वेस्टर्न चाइना इन्टरनेशनल फायर बेल्ट एण्ड रोड डेभ्लप्मेन्ट कन्फरेन्समा सहभागी भएका थिए।
प्रकाशित : आश्विन १३, २०७५ १३:५०
'वान–डे मान्यताको टयागबाहेक खासै केही फरक पाइनँ': ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान
‘हामी विश्वले नियाल्ने मुलुक हौं’
बीआरआई हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छ : प्रधानमन्त्री
‘अधिनायकवादको शंका गर्नुपर्दैन’